China Hydraulic Cylinder Seamless Pipe factory na ndị na-ebubata ya |XUANZE
Hydraulic cylinder enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ kwesịrị ekwesị maka mmanụ, hydraulic cylinder, n'ibu nhazi, oké mgbidi pipeline, chemical ụlọ ọrụ, ọkụ eletrik, ji esi mmiri ọkụ ụlọ ọrụ, elu okpomọkụ, ala okpomọkụ na corrosion eguzogide enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ, na ọ dabara maka mmanụ ala, ụgbọ elu, agbaze, nri, nchekwa mmiri, ọkụ eletrik, ụlọ ọrụ kemịkalụ, eriri kemịkalụ, igwe ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
N'ihi nrụgide mkpakọ nke elu nke fọdụrụ na oyi akwa nke hydraulic cylinder, ọ na-enye aka imechi micro cracks n'elu ma gbochie mgbasawanye nke mbuze.Ya mere, enwere ike imeziwanye nguzogide corrosion nke elu, na ọgbọ ma ọ bụ mgbasawanye nke ike ọgwụgwụ nwere ike igbu oge, si otú a na-eme ka ike ọgwụgwụ nke tube quilted dịkwuo mma.Site na-akpụ akpụ, a na-etolite akwa oyi akwa na-eme ka ọrụ oyi sie ike n'elu igwe na-akpụ akpụ, nke na-ebelata ngbanwe nke elu kọntaktị nke ụzọ egweri.
Ya mere, a na-eme ka ihe mgbochi na-eyi mgbidi dị n'ime nke tube quilting dịkwuo mma ma na-ezere ọkụ nke na-egweri.Mgbe ị na-atụgharị, mbelata nke ịdị nro dị n'elu nwere ike imeziwanye njirimara dabara adaba.
Rolling bụ ụdị mgbawa free machining, nke na-eji plastic deformation nke metal na ụlọ okpomọkụ flatten micro unevenness nke workpiece n'elu, ka ịgbanwe elu Ọdịdị, n'ibu Njirimara, udi na size.Ya mere, usoro a nwere ike nweta ma imecha ma na-ewusi ike n'otu oge ahụ, nke na-agaghị ekwe omume ịkwanye.
N'agbanyeghị ụdị usoro nhazi a na-eji, a ga-enwe ezigbo akara ngwaọrụ na-enweghị isi n'elu akụkụ ahụ, na-ebute elu ugwu na ndagwurugwu,
Rolling nhazi ụkpụrụ: ọ bụ ụdị nrụgide agwụcha, nke na-eji oyi plastic e ji mara metal na ụlọ okpomọkụ, na-etinye ụfọdụ nrụgide n'elu nke workpiece site Rolling ngwá ọrụ na-eme ka metal n'elu nke workpiece mepụta plastic eruba. ma jupụta na mbụ ihe fọdụrụ ala concave trough, ka ibelata elu roughness nke workpiece.N'ihi nrụrụ rọba nke igwe a na-agbagharị agbagharị, ihe owuwu dị n'elu na-ajụ oyi ma ọka na-adị mma, na-akpụ oyi akwa fibrous dị oke ma na-akpụ akwa nrụgide fọdụrụnụ.A na-eme ka ike na ike nke elu dịkwuo mma, ya mere a na-eme ka ihe mgbochi na-eyi, nkwụsị corrosion na ndakọrịta nke elu workpiece.Rolling bụ ụzọ nhazi rọba na-egbu egbu n'efu.
Uru nke ọkpọkọ ígwè na-enweghị nkebi maka hydraulic cylinder:
1. The elu roughness nwere ike iru RA ≤ 0,08 & micro;M.
2. The ovality nwere ike ịbụ ≤ 0.01mm.
3. A na-abawanye ike nke elu iji kpochapụ nrụrụ nrụgide, na ike na-abawanye HV ≥ 4 Celsius.
4. Mgbe arụchara ọrụ, enwere oyi akwa nrụgide fọdụrụnụ, ike ike ọgwụgwụ na-abawanye site na 30%.
5. Ọ nwere ike imeziwanye àgwà kwekọrọ, belata iyi na ịgbatị ndụ ọrụ nke akụkụ, ma ọnụ ahịa nhazi nke akụkụ ahụ na-ebelata.
Ọkpụkpọ igwe anaghị agba nchara hydraulic
Meziwanye ike ike ọgwụgwụgth nke ọkpọkọ quilted.
Meziwanye nguzogide eyi nke mgbidi dị n'ime nke ọkpọkọ ahụ.
Ọkpụkpọ hydraulic dị elu
A na-eji mmiri mmiri, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, nnukwu nrụgide na-enweghị ntụpọ maka ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, nrụgide dị elu maka akụrụngwa fatịlaịza, mkpọ ala ala, mkpọpu mmanụ, mgbawa mmanụ, olu mgbawa mmanụ, axles ụgbọ ala, ụgbọ mmiri.
Uru nke iji ngwaahịa hydraulic
E jiri ya tụnyere nnyefe igwe na nnyefe ọkụ eletrik, nnyefe hydraulic nwere uru ndị a:
1. Akụkụ dị iche iche nke nnyefe hydraulic nwere ike ịdị mma na nhazi nke ọma dịka mkpa.
2. Ibu dị arọ, obere nha, obere inertia mmegharị na ọsọ mmeghachi omume ngwa ngwa.
3. Mma ọrụ na njikwa, nke nwere ike na-aghọta stepless ọsọ iwu na a dịgasị iche iche (ọsọ ụkpụrụ nso ruo 2000: 1).
4. Enwere ike ime nchekwa nchekwa na-akpaghị aka.
5. N'ozuzu, a na-eji mmanụ ịnweta mmanụ dị ka onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ebe a na-akwagharị n'elu nwere ike lubricated n'onwe ya, na ndụ ọrụ dị ogologo;
6. Ọ dị mfe ịghọta linear ngagharị /
7. Ọ dị mfe ịghọta akpaaka nke igwe.Mgbe a na-anabata njikwa njikọ electro-hydraulic, ọ bụghị naanị ọkwa dị elu nke usoro njikwa akpaaka nwere ike ime, kamakwa njikwa anya nwere ike mezuo.
Nke gara aga: Ọgwụgwọ okpomọkụ
Osote: Ọkpọkpọ Pụrụ Iche
Ọkụ na-ekpo ọkụ Rolled Seamless Steel Pipe, Carbon enweghị nkebi Pipe, Ọkụ St52 enweghị nkebi, Ọkpụkpọ hydraulic, Na 179 enweghị nkebi tube, Carbon Steel enweghị nkebi,